VOHIPENO : Vehivavy iray tratran’ny fokonolona saika hamono ny mpanampiny ny faran’ny herinandro lasa teo
Divi-janahary sisa no tsy nahafaty ny renim-pianakaviana iray noho ny fitsaram-bahoaka. 6 janvier 2019
Fokonolona efa mamon’ny hatezerana no nifanenjana taminy, soa ihany fa tonga ara-potoana ny mpitandro filaminana. Tany Vohipeno, ny faran’ny herinandro lasa teo, no nahatratrarana renim-pianakaviana voalaza ho mpangalatra taova.
Tovolahy kely iray izay mpiasa tao an-tranony ihany no nokasainy hovonoina. Araka ny vaovao voaray dia nanam-bahiny ity ramatoa ity tao an-tranony, izay namany akaiky mpiara-manao asa ratsy aminy ihany, araka ny fantatra. Izy miampy ireto farany no nikotrika ny famonoana an’ity tovolahy mpanampy tao an-trano.
Nofatoran’izy ireo ilay tovolahy kely izay efa naradratran’ny vono sy daroka tanteraka. Niantso vonjy mafy anefa izy, ka izany no nahataitra ny manodidina. Nirohotra ny fokonolona nihazo ilay trano niavian’ny antso vonjy saingy efa tafaporitsaka nitsoaka ireo naman’ilay ramatoa tompon-trano, ka izy irery sisa no nifandritahan’ny fokonolona teo. Tonga ny mpitandro filaminana taorian’izay rehefa nahazo antso. Noho ny hatezeran’ny fokonolona anefa dia norobain’izy ireo tsy nananany antra ny trano sy ny fananana rehetra an’ilay ramatoa voalaza fa nikasa hanao ratsy.
Fantatra fa tsy vao sambany no nanao asa ratsy tahaka izao ity renim-pianakaviana ity. Efa nidoboka am-ponja izy noho ny halatra taolam-paty dia izao nikasa hangalatra taova izao indray.
Raim-pianakaviana iray matin’ny fanafody mampihenjana MORAFENO - TOAMASINA (237) 10 juillet 2019 Tratra tao Toliara i Jibril izay nahavanon-doza FANDATSAHAN’AINA AN’I GAEL TENY 67 HA (183) 9 juillet 2019 Voasambotra teny Anosizato ny jiolahy iray FANENDAHANA NIAMPY FANOLANANA (147) 10 juillet 2019 Mpandeha miisa 14 naratra mafy LOZAM-PIARAKIODIA TAO TOLIARA (111) 10 juillet 2019 Sinoa mibodo tanin’olona nitory ny ben’ny tanàna sy ny mpanolotsaina ADY TANY AO FARAHALANA - SAMBAVA (87) 10 juillet 2019 Saron’ny zandary tao Ambohimanga Rova ilay tambajotra goavana OMBY HALATRA (75) 12 juillet 2019